International Campaign for Freedom of Aung San Suu Kyi and Burma: မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကာလတွင် နယ်စပ်အခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် တိုင်းရင်းသား အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ ဒုတိယအကြိမ်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲမှ သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
အစည်းအဝေးတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရထံမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်သောအစိုးရမှ အာဏာလွှဲပြောင်းယူပြီးနောက် ဖြစ်နိုင်ချေနိုင်ငံရေးအလားအလာများ၊ တိုင်းရင်းသားဒေသများအလိုက် အပြောင်းအလဲအခြေအနေများ၊ လက်ရှိအစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံရေး အခြေအနေနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် အလားအလာများအပေါ် ဆွေးနွေးသုံးသပ် ဖလှယ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းနောက် အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတွင် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖက်ဒရယ်ဖော်ဆောင်ရေးဖြစ်စဉ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ နယ်စပ်အခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် ပါဝင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သော လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးများ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ရေး၊ သယံဇာတရယူအသုံးပြုမှုနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး၊ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှု၊ ဖက်ဒရယ်ရေးရာ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား များနှင့် ပညာရေးကဏ္ဍ၊ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်များ ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း ပုန်းအောင်းနေရသူများ အရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား မီဒီယာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စသည်ဖြင့် ကဏ္ဍ (၈) ခု ကိုသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ အခန်းကဏ္ဍများအလုိုက် စိန်ခေါ်မှုများ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် လုပ်ဆောင်လိုသည့် ကိစ္စရပ်များအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေအလားအလာများကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ကြပြီး အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများထံသို့လည်း ဤကဏ္ဍများအပေါ် အခြေခံသော အဆိုပြုချက်များ တင်ပြသွားရန်လည်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
"အစိုးရသစ်နဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ကျမတို့ရဲ့ အဆိုပြုတင်ပြချက်တွေကို နွေးထွေးတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ကြိုဆိုပြီး ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်" ဟု အစည်းအဝေးဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး ဂျူလီယာမရစ်ပ်မှ ပြောကြားသည်။
၁) ဂျူလီယာ မရစ်ပ် (အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)) +၆၆ (၀) ၉၃ ၂၂၈ ၄၇၃၀
၃) မခင်ဥမ္မာ (မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့) +၆၆ (၀) ၈၁ ၈၈၄ ၀၇၇၂
From 7-9 May, 2016, 56 representatives from 20 border-based democracy activist and ethnic civil society organizations heldasecond consultation meeting to discuss their role and the prospects for cooperation and collaboration in Burma's transition.
The participants identified eight areas where they can participate and cooperate in the process of implementing democracy andafederal system during the transition; human rights, women's participation in politics, natural resources and environmental protection, transitional justice, federal affairs, refugees and internally displaced persons (IDPs), the future of ethnic media, and migrant workers' issues, including their education. They also discussed and identified challenges, opportunities and prospects for these issues and agreed to submit recommendations to the NLD-led Government and ethnic armed organizations (EAOs).
Julia Marip, the General Secretary of Women's League of Burma (WLB) andamember of the organizing committee for this second consultation said, "We believe that the new government and the leaders of EAOs will warmly welcome our recommendations and include them in the transition process."
Julia Marip, Women's League of Burma, +66 (0) 93 228 4730
Saw Gipsy, Students and Youth Congress of Burma, +66 (0) 81 042 8398